Randriamiadanarivo,Mpit. – FJKM
RANDRIAMIADANARIVO , Mpitandrina
Mpanoratra , Mpampianatra
Teraka tamin’ny 12 Janoary 1916 tao Ambodihady Ambohimanarina . Mpitandrina FJKM izy . Nanambady an-dRamatoa RAZANADRASOA . Niteraka 12 mianadahy izy mivady . Notezainy mba hanao asam-panabeazana avokoa ireo zanany , ka izy rehetra dia saika mpitsabo , mpitandrina na mpampianatra avokoa . Ireto avy
Ny toerana niasany tamin’izany :
Filohan’ny Synodamparitany Fianarantsoa
Sekoly nianarany : Sekolim-panjakana Ambohimiadana Andramasina , sekolim-piangonana LMS Ambohidahy sy Fihaonana, Sekoly Normaly Ambavahadimitafo , Sekoly Paul Minault, Kolejy Teolojika Ambavahadimitafo
Nanomboka niasa izy
Amin’ny maha -Mpitandrina sy Mpampianatra
Taona 1939 : nampianatra tao aminn’y LMS Ambatonakanga , Isoavina.
Taona 1946 : nivoaka ho Mpitandrina ary niasa tao Ambohitsimeloka sady mpampianatra tao .
Taona 1950 : nifindra tao Isoavina nanohy ireo asa roa ireo
Taona 1981 : Nisotro ronono izy , fa mbola nantsoina nandamina fiangonana samihafa hatramin’ny taona 1997.
Amin’ny maha-Mpanoratra :
Mpanoratra tantara foronina sy lahatsoratra famakafakana . Ny fanabeazana sy ny riba tsara ho fantatry ny taranaka malagasy no niompanan’ny asa sorany . Anisan’izany ny Sikajin’Idadabe , Sekolin’ny Ntaolo, voromby , Isa ny amontana, Sodifafana…Mbola maro ireo asa soratra tsy tafavoaka , ka anisan’izany ny tantara momba an-dRadama II izay nosoratany ny taona 2004-2005 . Nomena ny mariboninahitra « Commandeur de l’Ordre National »izy .
Amin’ny maha- mpamoron-kira sy talenta samihafa :
Tsy mba fantatry ny olona loatra ny maha- mpamoronkira sy maha- mpanoratra tantara tsangana ary naha- mpanao tononkalo azy . Nankalazana an’ Andriamanitra ny Alahady 15 Janoary 2006 ny faha- 90 Taonany tao amin’ny FJKM Ambodihady vaovao . Ny Teny faneva tamin’izany dia nalaina tao amin’ny Salamo 91.15a-16 manao hoe : « Satria Izaho no niraketan’ny fitiavany dia hamonjy azy Aho …Hovokisako fahelavelona izy ary hasehoko azy ny famonjeko ».
Tahirin-kevitra niaingana avy amin’ny ankohonan’i
Dada Randriamiadanarivo sy ny Gazety Taratra